Zvese zveTrestolone Acetate (MENT)
1.Iiyo Trestolone Acetate (MENT)? 2. Trestolone Acetate inoshanda sei?
3.Uses yeTrestolone Acetate (MENT) 4.Trestolone Acetate (MENT) dosage
5.Trestolone Acetate (MENT) hafu-hupenyu 6.Trestolone Acetate (MENT) kutenderera
7.Trestolone Acetate (MENT) mhinduro 8.Trestolone Acetate (MENT) yekucheka
9.Trestolone Acetate (MENT) yekuwandisa 10.Trestolone Acetate (MENT) inobatsira
11.Trestolone Acetate (MENT) ongororo 12.Trestolone Acetate (MENT) poda yekutengesa
13.Where yekutenga Trestolone Acetate (MENT) poda
1.Iiyo Trestolone Acetate (MENT)?
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5, inozivikanwawo se7 alpha-methyl-nortestosterone (MENT poda) isimba rakanyanya simba rekugadzira rinova rakasimba kupfuura testosterone. Iyo steroid inoshandiswa kune zvinangwa zvekuvaka muviri pamwe nekudzidzisa simba. Iyi steroid ine mukana wekushandiswa pamabatiro echirume ekuzvidzivirira. Iyo steroid inokonzera kusakwana kubereka kwechinguva varume kana ikapihwa zvakaringana.
Trestolone Acetate (MENT) (6157-87-5) inofungidzirwa kuva ine simba rakapetwa kagumi kupfuura testosterone, uye semugumisiro, yakawana mukurumbira wakanaka kwemakore mazhinji. Iyo inobatirwa nenzira dzakasiyana siyana senge poda kana jekiseni. Iyi steroid inonyanya kushanda kune vakazvipira vanorema vanosimudza ma bodybuilders vanoshuvira kuwana mhedzisiro nekubatanidza iyo steroid nezvikafu zvine simba regimen pamwe nezvinowedzera.
2.Hoita sei Trestolone Acetate inoshanda?
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5 inobatsira kuvaka ma bodybuilders kuwedzera muswe uye kuderedza mafuta panguva imwechete. Kuti uwane mhedzisiro yakanyanya, iyo steroid inogona kusanganiswa pamwe nezvimwe zvinowedzera nekuomesa uye nekucheka muviri. Iyo steroid inokonzera kusakwana kwechinguva nekudzivirira gonadotropins kusunungurwa kubva pituitary gland.
Iyo steroid zvakare inhibititsa kuburitswa kwegonadotropins, follicle inomutsa mahormone, uye luteinizing mahormoni kunyange mune yakaderera. Follicle inomutsa hormone (FSH) uye Luteinizing mahormone (LH) inodikanwa mukuita kwespermatogenesis, inoitwa nokuedzwa kunozivisa spermatozoa.
Kana iyo kusunungurwa LH neFSH dzichivharidzirwa, spermatogeneis haina kuitika. Kudzvinyirira LH kunokanganisa kugadzirwa kwesperms uye curtails testosterone kugadzirwa, nokudaro kubereka. MENT powder ndeyakakwana kutsiva imwe kurapa kweakawanda mabasa ayo anoenderana androgen. Kuongorora kwakadzama kweScdrol (Methasterone) yekuvaka muviri
3.Uses yeTrestolone Acetate (MENT)
Kusiyana nemamwe anabolic steroid ayo ane mukurumbira wavo kune vatengesi vemusika mutengesi kana pamusoro pemakambani ekuwedzera makamuri, Trestolone Acetate ine mukurumbira wayo kune vepamutemo vekurapa, ongororo yesainzi ichiita kuti ive inozivikanwa kwazvo pakati penharaunda dzinovaka. Ment yakatanga kugadzirwa mu1960s
Munguva pfupi yapfuura, Schering, kambani-inotsvaga-yemishonga kambani uye Population Council vakagadzira kufarira kugadzira iyi steroid inotevera kutsvagurudza kwavo mune iyi steroid nezvinangwa zvechirume zvekuzvidzivirira pakurapa pamwe nekutsiva mahormone. Aya makambani akawana maitiro akasarudzika neiyo steroid yakakodzera kuvaka muviri. Kunze kwezvo, iyi steroid inobatsira zvakanyanya mu androgen kutsiva kurapa.
Kunze kwekudzivirira kubata pamuviri uye androgen kutsiva kurapa uye kubata pamuviri, sekugadzirira kwemukati kana seye transdermal, kune mamwe maTrestolone Acetate (MENTI) inoshandisa kusanganisira yekutanga hypogonadism, mhanza, kurasikirwa kwemapfupa, kenza yeprostate, testicular kukundikana, BHP, ASIH, sarcopenia, cachexia uye mhasuru kuparadza pamwe nekusimudzira mitambo uye kuvaka muviri.
Sezvo MENT isina kutengeswa semushonga, hapana kumbove nekugadzirwa kwakananga Trestolone Acetate (MENT) dosage nhungamiro dzeiyo steroid. Kuve ane yakanyanya mushonga steroid, madiki mashoma anoshanda kune anovaka muviri. Zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kuti mushonga wacho une simba kakapetwa kagumi kupfuura testosterone uye unodzvinyirira spermatogeneis makumi maviri anoshanda kupfuura testosterone.
Nekuda kweizvozvo, dosages pazasi 10mg (kazhinji 3-16mg) pazuva ichave inoshanda kune vakawanda kutanga. Mafuta-akavakirwa majekiseni emishonga iyi anogona kutorwa zvakapusa 10-20mg nekupindana kwemazuva maviri kusvika matatu. Vamwe vanhu vanogona kufunga kuti dosages yeanopfuura 10mg pazuva kwezvakanakira Trestolone Acetate (MENT) mhedzisiro sezvo kushanda kweiyo mushonga hakuna kufanana kune vanhu vese.
Vanhu vakasiyana vane madhigirii akasiyana ekunzwa kweiyo mishonga yekukurumidza uye estrogenic zvinhu. Yakakura dosages haikurudzirwi nekuti inogona kutungamira mukukuvadza kwakanyanya.
Vanoziva vashandisi veTrestlone vanogona kushandisa dosages ye20-50mg mazuva ese. Nekudaro, izvi zvinogona kusiyana zvichienderana nemhando iyo mairi inotorwa. Semuenzaniso, fomu rinokuvara rinogona kunge rakadzikira zvishoma kupfuura transdermal uye nemuromo mafomu. Muzhinji, zvakadaro, uyu mushonga hautumirwe nemuromo; majekiseni uye transdermal mhinduro inokurudzirwa senzira dzakanakisisa dzekutora mushonga uyu. Kuti uderedze estrogen uye prolactin mativi, zvinokurudzirwa kushandisa iyo steroid ine prolactin inhibitors seCabergoline uye aromatase inhibitor seArimidex.
Vamwe vashandisi vane ruzivo vanogona kutora dosages ye50-75mg zuva rega rega kutenderera kwevhiki dze4. Izvi vashandisi vanofanira kupatsanura donhwe muzvikamu zviviri, kureva, imwe isati yarara uye imwe mushure mekumuka. Nyanzvi dzinogona kutora dosage inosvika ku75-100mg. Musero wakadaro unogona kupatsanurwa kuita zvikamu zvitatu, sezvakaratidzwa pasi apa:
Usati warara kana manheru- 25mg
Maitiro akazara anodiwa kana uri pasi pesero reTrestolone Acetate uye nemimwe mibairo inoshanda. Imwe, saka, inoda kuchengetedza chikafu chakanaka chekubvisa mafuta uye kuwedzera mhasuru. Izvo zvakakosha kuti uchengetedze maitiro anoshanda ekusevenzesa pamwe nekushandiswa kusingagumi kunotevera kwakakodzera dosage mhinduro mumhedzisiro inoshanda uye kuderedza mhedzisiro.
5.Trestolone Acetate (MENT) hafu-hupenyu
Isoda-hafu-hupenyu inoreva nguva inotorwa nemuviri yekumwa mushonga uye kubvisa inenge hafu yehuwandu hunotorwa. Trestolone Acetate hafu-hupenyu kubva pamasere kusvika gumi nemaviri maawa (8-12 maawa).
Nekuda kweizvozvo, munhu anogona kutora mushonga wacho mune madiki madiki zuva rese, izvo zvichisimbisa kuti zvinogara zviripo muropa. Iyi mishonga inogona kutorwa muzvikamu zviviri kusvika zvitatu pazuva. Nekuda kwekusiyana kwekutarisa kweiyo mushonga muropa, zvakakosha kuti vashandisi vanogona kuverenga hafu-yehupenyu hwemushonga. Izvi zvichabatsira mushandisi kutora mushonga wacho mumadhidhi panguva.
Kana semuenzaniso mumwe achisarudza kutora 50mg pazuva, muchidimbu kwemavhiki mana, uye pasi pekufungidzira kuti mushonga une hafu-yehupenyu hwe8hours, kusiyanisa kwakawanda muropa kungave kunotevera.
Mune iyi dosage, mumwe anogona kutora mushonga mu8-awa maawa ekupfuura 25mg imwe neimwe. Kana dosi yacho ikatanga pa6 AM, kusangana kwacho kuchange kuri 12.5mg mushure memaawa e8 (2 PM) kana danho rechipiri ratorwa. Mushonga wechipiri une 25mg, iyo inosimudza iyo yakasungwa ku37.5mg.
Maawa masere mushure meyechipiri dosage (10 PM), iyo yakasungwa ichave iri 18.75mg. Maawa masere, gare gare, ichave iri 6 AM yezuva rinotevera, apo dhi yekutanga yezuva iro ichatorwa. Izvi zvinoreva kuti dosage yekutanga yezuva repiri ichaitwa kana muviri uine zhinjisa yeinenge 9.4mg kubva pazuva rakapfuura.
Maitiro akadaro anovimbisa kusunganidzwa kwakawanda kweiyo steroid muropa isati yasvika uye mushure mekuratidzira. Kuziva maitiro ekuverengera Trestolone Acetate (MENT) hafu-yehupenyu hwemushonga unobatsira vashandisi kuti vaone kuti iyo yekuiswa n yeiyo mushonga inongokwira chete panguva dzakanyanya kuomarara, dzinotangira nguva, uye zvakare mushure mekuratidzira. Kuverenga kwakakodzera kweTrestolone Acetate (MENT) hafu-yehupenyu kunobatsira mushandisi kutonga dosage uye kuwana zvinobatsira zvabuda.
6.Trestolone Acetate (MENT) kutenderera
Vanhu vakasiyana vanogona kushandisa macircuit akasiyana kana zvasvika pakutora Trestolone Acetate. Izvi zvichanyanya kuvimba nezviitiko zvemunhu nemushonga. Mumwe anofanirwa zvakare kunzwisisa zvinokanganisa danho ravanopinda mairi, zvichienderana nezvinangwa zvavo nezvinangwa zvavo vasati vazvipira kutenderera kwese.
Paunopinda mudenderedzwa, zvakakosha kufunga nezve urefu hwekutenderera pamwe nekusunganidzwa kwemushonga uri muropa kutenderera kwese. Nezvinangwa zvakanyatsodzika, zviri nyore kusarudza yakakodzera chaizvo Trestolone Acetate (MENT) kutenderera kuzvipira NeTrestolone Acetate, zvinokwanisika kuti uwane zvakakosha zvabuda kunyange nekutenderera kwemavhiki maviri. Nekudaro, kutenderera kwakakodzera kwazvo kunofanirwa kumavhiki mana kusvika matanhatu. Iyi idenderedzwa yakakodzera nekuti inodzivirira mumwe kubva mukukwiridzira dhaidhi yavo.
7.Trestolone Acetate (MENT) mhinduro
Trestolone Acetate isrogen yakanyanya iyo inowana mukurumbira nekuda kwemasimba ayo. Imwe yemaficha, nei vanhu vazhinji vachifunga iyi steroid, imhaka yezvakabuda zvakanaka zvinowanikwa mukati menguva pfupi pfupi. Mushonga uyu une mhedzisiro ine simba kune vanhu vari kutsvaga kuwana nekukurumidza kusimba kwesimba.
Vakatanga kushandisa mushonga uyu vanogona kuwana zvinooneka zvichangoitika kupfupi svondo mbiri pasina kuiswa. Kune yakakura potency, vashandisi vanogona kuwana inoshamisa incus yemuviri kuwana uye uremu mhedzisiro kunyange nemadiki madiki e3-6mg. Iyo tsandanyama inowana mhedzisiro zvakare inogara-kwenguva refu, izvo zvinoita kuti vatambi pamwe nevanorema vanosimudza vafunge zvakanyanya uyu mushonga.
Vanhuwo zvavo kunze kwevanovaka ma bodybuilders vanokwanisa zvakare kushandisa mushonga uyu kuwana unoratidzika muviri. Iyi mibairo inogona kuvandudzwa nekuchengeta kwakanaka Workout routines uye nekudya kwakaringana. Mushonga unopa vashandisi simba rakawanda rekushandisa, izvo zvinoda kukwidziridzwa kwekutya.
Kugona kwe Trestolone Acetate poda kudzvinyirira kuburitswa kweiyo steroid yekudzora maitiro e-spermatogeneis inoita kuti mushonga uyu ubatsire pakurapa kwekuzvarwa nevarume.
8.Trestolone Acetate (MENT) yekucheka
Trestolone Acetate inopa mushonga unobatsira vanhu vanofarira kucheka. Trestolone Acetate (MENT) kucheka kunoita kuti vakwanise kusimudza uremu uye vanovaka ma bodybuilders kuderedza mafuta mazhinji mumiviri yavo pasina kunyanyo kunetseka mumhasuru yavo. Kuti uwane saizi yakaonda neine fabulous physique, Trestolone Acetate inogona kushandiswa pamwe nemamwe madhiraizi kusimudzira mhedzisiro muTrestolone Acetate (MENT) kutenderera kutenderera zvichienderana nemishumo yaunoda pamwe nekunzwa kwemunhu wega wega uye oestrogenic sensitivity.
Kucheka zvikamu zveTrestolone, mumwe anogona kusunga Winstrol neasina-aromatizing androgens seHalotestin kana trenbolone. Iko kusanganiswa kwakadaro kuchabatsira mumwe kuwana yakasimba tsanangudzo yemuviri uye yakaoma masculinity ayo vazhinji vavaki vemuviri vanoshuvira kuzadzisa. Vanhu vane manzwiro akakwira vanogona kufunga kuwedzera madomasi akadai saDeca-Durabolin, Equipoise kana primobalin kana achitengesa Trestolone acetate.
9.Trestolone Acetate (MENT) yekuwandisa
Trestolone inogona zvakare kuve yakarongedzwa pamwe nemamwe ma-steroid eku bulking. Trestolone Acetate (MENT) poda yakawandisa inowanzoitirwa vanhu vanotsvaga kuti vawedzere kuwana mhasuru mukuwana, nguva dzose nekushingirira uye kwakarongeka kudzidziswa uye kunoshanda. Kunyanya, kuedza kuderedza mafuta emuviri kunogona kutungamira kudzidzisa kunyanyisa izvo zvinogona kutungamira kurasikirwa kwemhasuru. Trestolone, kana ikasanganiswa neakakodzera steroid, inogona kuita kuti zvive nyore kune mumwe kurasikirwa nemafuta emuviri, kuchengetedza uye kuita kuti kuwanikwa kwemasuru kuwanda uye kugonesa muviri kuve nesimba uye simba rekutsungirira kwakawanda uye kwakasimba kwemaitiro.
Bulking dzimwe nguva inogona kuva yakaoma kune vanhu vanotsvaga kuwana zvinomhanyisa mhedzisiro munguva pfupi. Masekiseni akanyanya kudaro anogona kupa mushandisi huwandu hwakawandisa, hunosanganisira kuchengetwa kwemvura. Mhedzisiro idzi dzinogona, zvisinei, dzisingagare kwenguva yakareba. Mamwe emadhorobhaidhi anogona kubikwa neTrestolone Acetate (MENT) kweruzhinji kutenderera kunosanganisira Dianabol, Anadrol, uye Trenbolone.
Dianabol ndeimwe yemasabolids ayo anotariswa zvakanyanya kune bulking nekuda kwekugona kwayo kuita nekukurumidza uye inowana kukurumidza kuwana mukati menguva pfupi. Stacking Trestolone ine Dianabol inogona kukonzera kusvika kune 20 mapaundi emasisita pamasvondo 6. Dianabol inobatsirawo nekuti ine denser uye bulky masasi pasina majekiseni.
Deca-Durabolin, inozivikanwawo seNandrolone, inoshandiswa kubhuroka nevanhu vanotsvaga nekukurumidza kuporesa kupora uye kupora mhasuru. Izvo zvinobatsirawo post post mzunguko kurapwa nekuti inopfupisa simba rekushandisa. Iyi steroid ine mashoma emhedzisiro mhedzisiro uye inogona zvakare kushandiswa pamwe chete androgenic steroid yakadai saDianabol.
Trenbolone ine mwero simba uye potency uye inoshandiswa kune bulking kutenderera kweanotsvedza muviri physique sekucheka. Kunyangwe iine simba rakakwira, inogona kunge isingabatsire kune vanovaka muviri vanogadzirira makwikwi. Iyo inogona, zvisinei, kubikwa mune chero yakawedzera kutenderera kutenderera.
10.Trestolone Acetate (MENT) inobatsira
Trestolone acetate inomira kunze mumusika nekuda kwe potency yayo yakasimbiswa nevanoongorora zvekurapa uye yave ichizivikanwa nekuomarara kwayo pamusoro pemhando. Trestolone acetate ine zvakasiyana siyana zvakasiyana, kunyanya kune vanhu vari kutsvaga kukwana muviri wavo pamwe nekuzadzisa chinangwa chavo chekusimba. Iyo yepamusoro inokurudzirwa kubatsira kuvandudza kwemhasuru pamwe nekudzikisira uremu. Iyo steroid inobvumira vashandisi vayo kuwana yakatsiga, inoremekedzeka muviri nehupamhi hwemhasuru kuwana. Zvimwe zvepamusoro Trestolone Acetate (MENT) zvikwaniriso yakabatana naTrestolone acetate inosanganisira:
· Trestolone acetate yave ichizivikanwa kuti inoshanda nekukurumidza kupfuura mamwe ma-steroid. Trestolone acetate inoburitsa zvinoitika mushure mejekiseni. Vashandisi vacho vakataura shanduko inoshamisa mune dzimwe mhasuru dzemuviri mushure mekunge vatora dhabhu. Zvinoshamisa kuti mhedzisiro yayo ndeyakareba, uye vashandisi havafanire kuzvinetsa nekuzvibaya jekiseni ravo kuti vachengetedze tsandanyama dzavo. Mushonga uyu unopa kakapetwa kagumi kupfuura myotopic athari ye testosterone iyo inoita kuti iwedzere mwero wayo wekuvaka mhasuru yakakwirira kupfuura chero imwe steroid mumusika.
· Trestolone acetate inogona kushandiswa sechimwe chinodhaka mushonga wekucheka uye kugona kwayo kuita nekucheka kunosimbiswa. Mushonga uyu une zvinhu zvakasarudzika zvakaita sekumisikidza nemamwe maprohormones ayo anobatsira mukuvandudza kutenderera, nekudaro zvichishandira zvakanakisa kune mumwe munhu anotsvaga kubvisa zvimedu zvehutsi uye zvakare kupisa mafuta.
· Trestolone acetate yakaratidza kubatsira mune bulking mizinga. Iyo mishonga inobvumidza mushandisi wayo kuve nehupfumi hwekuchengetedza nitrogen zvinovabatsira kukurudzira kuumbwa kwemhasuru. Mushonga uyu zvakare unogadzirisa vanovaka muviri chengetedza iyo anabolic mamiriro emitumbi.Iyo Inonyanya Kutungamira kune Nolvadex kubata chirwere chemuti
· Iko kushandiswa kweTrestolone acetate kunowedzera kugona kwemuviri synthesis mapuroteni. Nekudaro, mushonga unoburitsa kukurumidza kukurumidza kwetsandanyama sezvo mapuroteni anoita seaya anovharira muviri.
· Mushonga uyu zvakare unowedzera simba. Kuwedzera simba nhanho kunobatsira vashandisi kukudziridza kugona kwekudzidziswa zvakanyanya uye zvakareba. Uyezve, kuwedzera simba mazinga anobatsira kuvaka vavaki kupfupisa mabhureki avo, nekudaro achivabatsira kushaya simba kakawanda.
· Kusiyana nezvimwe zvinodhaka, trestolone Acetate haichinji kuita estrogen. Estrogen ine zvinokuvadza pamuviri wemurume, sekukonzera kusagadzikana kwe erectile, kupera simba uye kushaya tsandanyama. Nekudaro, MENT yakambotorwa inotora chikamu che testosterones mumuviri wevashandisi nekudaro kuchengetedza zvakashata mhedzisiro yeestrogen.
Zvakare, kusiyana nemamwe manyoroids, mushonga haushandure kuDHT. Zvakare, iyo steroid yakawedzera potency sezvo isinga sunge neyepabonde hormone-inosunga globulin (SHBG).
11. Trestolone Acetate (MENT) ongororo
Trestolone Acetate yakagara ichizivikanwa seine simba uye inoshanda anabolic steroid. Vanhu vazhinji vakashandisa Trestolone Acetate yekuvaka muviri mishonga yekuvaka muviri yemasumbu kuvaka pamwe nezvinangwa zvekurapa. Vanhu vakadaro vakataura kugutsikana kwavo nemushonga uyu kuburikidza nekwavo kwakavimbika vatengi. Izvi zvinotevera mamwe ekuongorora kwemushandisi akanyorwa nevashandisi vakadaro:
Nick is 27-ane makore-anovaka bodybuilder uye anoshanda veteran weTrestolone poda yekuvaka muviri. Nick akashandisa chigadzirwa ichi kwemwedzi misere, uye ari kufara nezvakawana. Anoti mushonga uyu wakamupa mhedzisiro sezvaaida. Nick anoramba achiwana zvinoshamisa muswe misa pasina mhedzisiro. Ari kufara kuti mushonga hauna kumupa kurasikirwa kwechido, kushanduka kwekuita. Dambudziko roga rakasangana naNick neiyi steroid usiku hwekutsvaira uye kumwe kushaya hope. Sezvo aimbove muvhisi wekuvaka muviri, Nick aishandiswa kumativi akadaro uye aisakwanisa kuvawana vachishushikana.
Greg mumwe mushandisi anofara weTrestolone yekuvaka muviri. Greg anga achishandisa mushonga uyu uye parizvino aripakati pekutenderera kwake kwechipiri mushure mekurapa kwekutenderera. Munhanho yake yechipiri, anga achiwedzeredza, uye mhedzisiro yacho iri nani. Greg arikuronga kutanga kucheka achangopedza nechitenderera ichi. Greg anoti aisazvidza pakutanga uye aitya kuti mushonga uyu waizove nemugotsi mungozi mumuviri wake. Kushamisika kwake, mushonga uyu wakashanduka kuva imwe yemapiritsi anonyanya kukosha aakamboshandisa. Mushonga uyu wamupa simba rakakwirisa, muviri wakanaka, uye wakamugonesa kuvaka mhasuru dzakakura. Greg anodada nemushonga uyu uye anoti anochikurudzira chero munhu.
Clinton anonzwa kufadzwa kuti agovane ruzivo rwake neTrestolone Acetate yemigumisiro yakajeka yaakawana mukati menguva pfupi uye madiki diki emushonga uyu. Clinton haazi wekusimudza uremu kana kuvaka muviri asi asi mugadziri wefashoni nechido chemufaro wakanaka uye kusimba kwemuviri. Akashandisa mushonga uyu kweanoda kusvika gore, uye anofara kuti kunze kwekuwana tsandanyama uye muviri mutserendende, mushonga uyu wakamubatsirawo kuve akavandudza libido, kugara zvakanaka, uye ganda rinotsvedza. Mushonga uyu wakamubatsirawo kuderedza mafuta emuviri, izvo zvinomufadza kwazvo. Clinton anotarisira kuenderera mberi nekushandisa mushonga uyu nekuti haana uye nematambudziko nawo.
12.Trestolone Acetate (MENT) poda yekutengesa
Vagadziri veTrestolone Acetate vakaita shuwa kuti chigadzirwa chiri chemhando yepamusoro. Nekudaro, kune vanhu vazhinji mumusika mutema uye maebhu epasi pevhu vari kutengesa chigadzirwa chemhando yepamusoro uye nemitengo yepasi. Kudya kweTrestolone Acetate yemhando yepasi kunogona kukonzera mhedzisiro yakaipa senge yekenza yeprostate. Naizvozvo, vatengi uye vashandisi veichi chigadzirwa vanofanirwa kungwarira pavanenge vachitenga Trestolone Acetate (MENT) poda inotengeswa.
Nekuda kwekuzivikanwa kwayo uye kuwedzera kwehuwandu hwevanhu vanokoshesa uye vanoda kuwana hutano hwakanaka, mushonga unowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Mukana wakawedzerwa weiyo mushonga ndewekuti inowanikwa semutengo wakakodzera pane mamwe maSmallid. Kune vatengi vanotarisa kutenga hupfu muhuwandu hukawanda vanowana chigadzirwa nemutengo wakaderera. Ichi chigadzirwa chiri kutengeswa mumaviri mairi, ayo ari pre-musanganiswa mafuta akachena mu100mg / ml uye 99% yakachena Trestolone Acetate poda.
13. Iko kwekutenga Trestolone Acetate (MENT) poda
Trestolone Acetate inowanikwa pane vatengesi vepasi rese vanowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rese vakaita seChina, United States, Canada, Brazil, neMexico. Vatengesi vepasi rese vakaita kuti mushonga uyu uvepo pamawebhusaiti avo kuti vatengi vatengese kumapuratifomu avo.
Zvakare, iwe unogona zvakare Tenga Trestolone Acetate (MENT) poda kubva kune mamwe masayiti epamhepo pamitengo yakanaka, Mumwe anogona zvakare kutenga Trestolone Acetate (MENT) muhuwandu kubva kune vatengesi vemuno asi iwe unonyeverwa nezvekutarisa mhando uchitenga chigadzirwa munharaunda seyenhema vanyengerera mumusika. Vatengi vanowanzodiwa kuti vatenge zvigadzirwa pamawebhu emakambani akasarudzika pane kune zvimwe zvinowanikwa online, uye Trestolone Acetate (MENT) mutsigiri kuona kuti vanowana chigadzirwa chemhando.
Trestolone yakawana mukurumbira wekuzivikanwa mukuvaka muviri uye zvimwe zvinangwa zvekurapa, sekudzivirira kwechirume. Ichi chinodhaka chinoramba chiri chega chinonyanya kunetseka mumusika nemukurumbira wayo zvinonzi kune yakakwirira potency. Mushonga uyu une zvakawanda zvakanaka kune vashandisi, uye unobatsira zvikuru. Vashandisi ve uyu mushonga vanofanirwa kucherenga yavo dosage masheji, iyo hafu-yehupenyu kuverenga, pamwe nekuchengetedza nguva dzose kurovedzwa uye chakakodzera chikafu. Kana iwe uri kutsvaga kutenga Trestolone yekuvaka yemuviri, unogona kushanyira buyaas.com webhusaiti kuisa yako yekuraira uye kubvunza rumwe ruzivo.